Maxaad jeceshahay ugu fiican ee u dhexeeya E-mooto, mooto smart iyo E-skeidgareeyo? - Jomo Technology Co., Ltd
Maxaad jeceshahay ugu fiican ee u dhexeeya E-mooto, mooto smart iyo E-skeidgareeyo?
Imaansho , muuqaalka iyaga ka mid ah way kala duwan yihiin, laakiin asal ahaan ku tiirsan yihiin dheelitirka ee dadka si ay u gaaraan, oo ku saabsan baahida loo qabo awood dheelitirka hanaanka waxbarasho oo gaar ah, mid ka mid ma wanaagsana, at fuushan, kuwaas oo tan iyo markii ay dhashaan noqon doonaa.
Mooto Electric iyadoo labada dambe marka loo eego, waxaa ka hawl yar in ay bartaan oo ay gacanta ku sida weel sida dheeraad ah oo ammaan ah, maxaa yeelay heerka xamili yareeyo suurto gal ah, gaar ahaan ku burburtay laylis ah, halka ku tiirsan ay guranayaan jihada.
Jejebiyey , oo dhan waxay leeyihiin shaqo kala jejebiyey, laakiin habka Fariin waa kala duwan, kala jejebiyey mooto korontada waa kala jejebiyey farsamo, on bidix ee kabaalka gacanta ayaa button jejebiyey ah, waxa kale oo aad talaabo karaa wheel aad ka danbeeya, waa kala jejebiyey dadban.
Mooto The Smart iyo Electric skeidgareeyo's Biriigu ku xiran tahay dheelitirka dambe, halka tiiro dadka iyo baabuurta la jejebiyey baabi'i doontaa, iyadoo aan loo eegayn waxa xawaaraha waa, biriiga si fudud loo xakameyn karaa, iyagu waa kala jejebiyey firfircoon.
Speed , xaaladaha caadiga ah, xawaaraha lagu skeidgareeyo korontada si dhakhso ah, oo kedis ah awoodda waa ka fiican labada kale oo aan ahayn. Xawaaraha caadiga ah waa 30km / h, xawaaraha sare waa 40km / h, dhaqso u tagaan
Koowheel Electric mooto L8, xawaaraha max waa 25 Km / h halka warshad fasaxa (xawaaraha The max laga beddeli karaa si 30km / H thrugh goob APP by user)
Xawaaraha max ee Smart mooto dheelitirka K5 waa 15km / H.
Waa la arki karaa in mootooyinka korontada L8 iyo skeidgareeyo Electricwaa ka dhaqso badan mooto smart xawaaraha. Waxaan qaadi kartaa meel kasta oo tag. Skeidgareeyo Electric waa ku ool ah, wax aad u cad inta lagu jiro saacadaha soo wariyay in. Dhamaan iyaga ka mid ah waa qalab wanaagsan safarada gaaban.
Kor qalab-safar gaaban moodada iyo qabow, oo ha jeclaan aad ugu fiican?